40 dhizeti mapepa neThermomix - Dhawunirodha bhuku reresipi
40 dhizeti mapepa ane Thermomix
Mune ino nyowani yedhijitari yekubheka bhuku iwe yaunowana 40 yakanakisa pastry ndiro nemakeke, muffin uye bundtcake, pamwe necrostatas, crumbles, makuki uye mapundu ehupfu uye hombe sarudzo yemakeke uye crepes. Uye zvechokwadi ivo vaisakwanisa kupotsa zvishongo zveiyo confectionery: iyo truffles. Dessert yakagadzirirwa munhu wese, sezvo mazhinji eeresipi akakodzera kune vanhu vane kusashivirirana kana vanotevera chikafu chemuriwo.
40 inonaka dhizeti yekubika haina kumbobvira yaiswa pane iyo blog pamberi
Izvi ndizvo chikafu chinotapira kubva kuThermorecetas, Takazvipira nerudo rwedu kuvateveri vedu vakavimbika avo vanotitevera zuva nezuva uye vanotibatsira kuti basa iri riitike. Tinovimba unonakirwa nazvo zvakanyanya sekufara kwatakaita nekuigadzirira.
Iwe uchashamisika shamwari dzako uye mhuri nema dhizeti seanonaka se:
Bhabheriji Buttermilk Waffles
Kaviri caramel makapu
Cream uye Chokoreti Crostata
Zhizha rinoputsika nemaapuro, mapichisi uye macheribheri
Yakagadziriswa mukaka kirimu millefeuille
Cheese mousse ine mango compote
Pionono yekofi uye diplomatic cream
Chocolate Cheese Keke Makeke
Greek yogati keke
Chokoreti chena truffles ine blubheri uye lime
Kusava nechokwadi? Edza recipe yemahara
Kana iwe uchine kusava nechokwadi nezve izvo zvauchazowana mubhuku reresipi, isu tinokupa iwe imwe yeakanyanya mabikirwo eiyo eBook: zvinonaka tangerine ginger muffin. Dhawunirodha pano.